भ्रष्टाचार आरोपी बाँष्कोटा ओलीपछिकै शक्तिशाली, काभ्रेमा यसरी खन्याइयो बजेट ! « GDP Nepal
भ्रष्टाचार आरोपी बाँष्कोटा ओलीपछिकै शक्तिशाली, काभ्रेमा यसरी खन्याइयो बजेट !
काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै मन्त्री पद गुमाएका काभ्रेका गोकुल बाँस्कोटाको दबदबा भने अझै उस्तै छ । भ्रष्टाचार आरोप लागे पनि सरकारको संरक्षणका कारण कुनै अनुसन्धान नै हुन नसकेका बाँस्कोटाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का आफ्नो गृहजिल्लामा गराएको बजेट विनियोजन हेर्दा उनलाई सरकारको संरक्षण पुष्टि हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गृहजिल्ला झापा र गृहनगर दमकमा गराएको बजेट विनियोजनकै झल्को दिनेगरी बाँस्कोटको जिल्लामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । चुनावी वर्ष पनि भएकाले कतिपय आयोजना कागजमा मात्रै राखेर भए पनि बाँस्कोटालाई चुनाव लड्न सहज बनाइएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र बाँस्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि आफैं सञ्चालन गरिरहेको बताइन्छ । दोलखाका पार्वत गुरुङले यस मन्त्रालय सम्हालिरहे पनि पर्दापछाडि रहेर बाँस्कोटाले नै मन्त्रालय चलाइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
सञ्चार मन्त्रालय मातहतको नियुक्तिमा बाँस्कोटाकै तजविजि चल्ने र गुरुङ भने निमित्तको भूमिकमा रहेको पछिल्ला नियुक्तिले नै पुष्टि गर्छन् । महिला वालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा राम्रो काम गरेको भनेर सम्मान कमाएका गुरुङ बाँस्कोटाको छायाँमा परेका छन् ।
आउँदो वर्षको बजेटमा काभ्रेपलाञ्चोकमा सात ठूला आयोजना समेटिएको छ । गत साल सुरु गरिएका बाहेक सात नयाँ पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
केपी ओली र गोकुल बाँस्कोटा
बजेटमा भक्तपुरबाट काभ्रेपलाञ्चोकको रवी हुँदै पाँचखालसम्मको सुरुङ्मार्ग, बनेपामा फिल्म सुटिङ स्टुडियो, सुनकोशी नदीको दोलालघाटदेखि खुर्कोट हँुदै चतरा–अरुण दोभान जल यातायात, कागती उत्पादन पकेट क्षेत्र एवं विस्तार, काभ्रे भ्याली स्मार्ट सिटी तथा पाँचखाल, बनेपा, धुलिखेल र पनौती आसपासका सम्भावित क्षेत्रमा सहरी विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, अरनिको राजमार्गको धुलिखेल–दोलालघाट–कोदारीखण्ड स्तरोन्नति (चार–लेन) तथा विस्तार गर्न १ अर्ब १४ करोड व्यवस्था गरिएको छ । पाँचखालमा निर्माण हुने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई १ अर्ब ५५ करोड र निर्माणाधीन पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), बनेपाको साँगामा निर्माण हुने प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, तेमाल बृहत खानेपानी योजनालगायत सडक, विद्युत, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि क्रमागत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जिल्लाका पुराना तीन नगर बनेपा, धुलिखेल र पनौती समेटिएको ‘काभ्रे भ्याली’ स्मार्ट सिटीका लागि १ अर्ब बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।
काभ्रेकै अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा भने बजेट विनियोजन भएको छैन । यसबाट नै सरकारको पूर्वाग्रह भने प्रष्ट हुन्छ ।